Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp oo hadlay tagitaanka Kooxda ee Mohamed Salah
Home Horyaalka Ingiriiska Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp oo hadlay tagitaanka Kooxda ee Mohamed Salah
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku adkeystay in kooxdiisu aysan ka fiirsan doonin inay iska iibiso xiddiga weerarka ka ciyaara Mohamed Salah .
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Masar ayaa horay u dhaliyay qalalaase isagoo diiday inuu meesha ka saaro inuu u dhaqaaqayo Real Madrid ama Barcelona mustaqbalka, qandaraaska uu haatan kula joogo Anfield wuxuu dhacayaa 2023.
Iyadoo daafaca Liverpool uu burbursan yahay, wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka Salah ayaa sii xoogeysanayay, laakiin Klopp ayaa tan iyo markaas biyo qabow ku shubay wararka xanta ah ee xagaaga ka tagaya.
Isagoo la hadlayay suxufiyiinta, tababaraha Jarmalka wuxuu yiri: “Aad ayey muhiim ugu tahay – koox ahaan iyo inuu Mo halkaan nala joogo. Inta badan maahan inaan ku amaano ciyaartoydeyda, taas oo dabcan marwalba aan jeclahay inaan sameeyo.
“Laakiin marka laga hadlayo Mo ma ahan oo kaliya gooldhaliye. Waa mid horumarsan kubada cagta sidoo kale – waana ciyaaryahan aad iyo aad muhiim noogu ah. Waxaan rajeynayaa inuu intaas sii ahaan doono muddo aad u dheer. waqti, dabcan.
Salah ayaa ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan Premier League xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 17 gool, waxaana uu ku faanay 118 gool iyo 45 caawin uu sameeyay 187 kulan oo uu u saftay Liverpool tan iyo markii uu yimid seddex iyo bar sano ka hor.
Previous articleYussuf Poulsen oo sheegay in Rb Leipzig ku Riyoodaan ku guuleysiga Horyaalka Chermany.
Next articleJoogitaanka Lionel Messi ee Barcelona oo Sheeko Cusub ku soo korortay